Blockchain Izindaba 16.05.2018 - Blockchain Izindaba
New blockchain ETF uqala NYSE
A new Isikhwama blockchain exchange-adayiswa umkhankaso ngoLwesithathu New York Stock Exchange.
I ETF (BKC) kunesithembiso ukwabelana 32 izinkampani usebenza cryptocurrencies noma eziyimbangela blockchain ubuchwepheshe yabo. I ETF is run by Rex Wabelana futhi isiphethwe kaBrian Kelly, a CNBC Umelekeleli nenhloko BKCM, okuyisona a izimpahla digital isu amaklayenti.
Isikhwama linanezincwadi ukwabelana Square kanye chipmaker Advanced Micro Devices.
UNgqongqoshe wezeziMali French uthi abanothando cryptos
The French uNgqongqoshe wezeziMali, Bruno Le Maire, isibe isikhulu esiphezulu kakhulu aseYurophu ngokungagunci ukwesekwa mfihlo njengoba athi isikhala has yakhe "Imininingwane kunquma ukwesekwa."
Le Maire muva wathi, ngokusho translation anolaka:
"Ngangineminyaka entsha unyaka owedlule, kodwa manje kungijabulisa abanothando. Kwangithatha unyaka. Ake bafundise izakhamuzi zezwe lethu nabo ukwenza France kwasekuqaleni ngoba blockchain futhi mfihlo-amafa emisha e-Europe. "
Coinigy oluqalisa okubhaliselwe based mfihlo ukuhweba lokusebenza
Coinigy, isiteji cryptocurrency ukuhweba esisekelwe efwini, umemezele kwethulwa Coinigy Hambayo, a cryptocurrency mobile isicelo okubhaliselwe ezisekelwe ukuhweba for iOS and Android, ukuhlinzeka amakhasimende nge platform nokuhweba ngendlela etholakala kalula cishe 20 Ukuhwebelana nge uxhumano lwedatha yonkana ezingaphezu kuka 40 Ukuhwebelana.
Ngokungafani cishe zonke cryptocurrency zokuhweba amapulatifomu, the Coinigy Ucingo ukuhweba lokusebenza lusebenza ku-model okubhaliselwe lapho abasebenzisi banikwa ukufinyelela yesikhulumi kanye nokusebenza yayo ngoba $21.95 ngenyanga.
izimayini Bitcoin imishini umkhiqizi amafayela eKhanana $ 1B Ipo
EKhanani Inc., Umenzi bitcoin izimayini hardware lesibili ngobukhulu emhlabeni, uhambise isicelo uhlu Hong Kong Stock Exchange, lokhu kungaba mfihlo enkulu kunazo zonke emhlabeni ezihlobene Ipo.
EKhanani ihlose ukuqala ukuhweba ngokushesha nje Julayi, ngumuntu onolwazi sendaba wathi, Ukubuza hhayi ngenxa yokuthi ulwazi luyimfihlo. Inkampani, ngokusekelwe ku Hangzhou, ithengiswe 300,000 bitcoin izimayini yokumba ngonyaka odlule futhi kwadingeka ngemali 1.3 bhiliyoni yuan ($205M). Kulo nyaka esisuka kuwona, umholo ophelele angena ngomfutho ezingaphezu kuka sixfold, ngokuvumelana wokufaka ngoLwesibili.
Uhlu laseKhanani kungaba owokuqala Hong Kong Ipo kusukela umkhakha cryptocurrency.
Komphakathi nokutshala izimali platform eToro ukuqalisa exchange mfihlo e-US
eToro, isiteji nokutshala izimali zomphakathi, uqala exchange cryptocurrency futhi isikhwama mobile, ekwandiseni ku-United States.
“Abathengi emhlabeni wonke kufanele ukufinyelela amathuluzi abawadingayo ukuze ubambe iqhaza izimakethe cryptocurrency, kungakhathaliseki nobuchwepheshe babo,” CEO Yoni Assia kusho umbiko wephephandaba owakhishwa e.
Top cryptocurrency abahwebi uzokwazi ukuze ithole ingeniso ethe ngokwenza amaphothifoliyo abo obala eToro futhi sivumele abanye abahwebi ukukopisha imisebenzi yabo.
Isiteji has 10 abasebenzisi million 140 amazwe, bevela eChina naseRussia eSwitzerland nase-United Kingdom.
Nakuba kungekho umugqa wesikhathi yanikelwa ngenxa lapho ongakhetha cryptocurrency izotholakala U.S, eToro uhlela ukunikeza cryptocurrency ukuhweba ngazo zonke yomthetho ezweni.
Azerbaijan izintela ngenzuzo etholwe cryptocurrency
Azerbaijan unzima ngenzuzo etholwe cryptocurrency, ngokuvumelana Nijat Imanov, umqondisi-jikelele oyiphini inqubomgomo yentela futhi umnyango ucwaningo lwamasu Izintela Ministry, ngokuvumelana wezwe Trend News Agency.
Uma othile uthenga cryptocurrency ulidayisela ngentengo ephakeme, inzuzo liqoshwe njengombhali engenayo futhi kuncike intela, Imanov wathi, ukusibiza intela inzuzo for nezinhlangano ezingokomthetho futhi intela edonswa eholweni abantu ngabanye.
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 15.05.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 17.05.2018